अमेरिकी नायिकालाई बलिउड बोलाउँदै सलमान – Namaste Filmy
अमेरिकी नायिकालाई बलिउड बोलाउँदै सलमान
बलिउड दबङ खान सलमान र सुन्दरी नायिकाबीचको सम्बन्ध सधैं चर्चाको विषय बन्छ। हुन पनि सलमानको साथ पाएका नायिका कुनै न कुनै दृष्टिले सफल र आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेका छन्। सलमानका कारण यतिखेर बलिउडमा एकजना हलिउड सुन्दरीको चर्चा हुन थालेको छ। उनी हुन्, अमेरिकी नायिका एड्रिन पलिकी।
सुन्दर र क्षमतावान् नायिकालाई आफ्नो बहुपासमा पार्न खप्पिस सलमान अहिले हलिउड नायिका पलिकीलाई भारत ल्याउने पहलमा लागेका छन्। समाचारस्रोतका अनुसार सलमान खान्स विइङ ह्युमन प्रोडक्सनको सहनिर्माण रहेको हलिउड चलचित्र ‘डा. क्यावी’को प्रचारका लागि पलिकीलाई ल्याउने पहल भएको हो।
आगामी सेप्टेम्बरमा हुने ‘टोरोन्टो इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल’मा प्रिमियर गरिने चलचित्र ‘डा. क्यावी’ भारतमा सलमान खान अभिनीत चलचित्र ‘किक’ पछि प्रदर्शन हुने बताइएको छ। क्यानेडियन निर्देशक जिन फानकोइस पाउलियटको निर्देशन रहेको यो चलचित्र छायांकनदेखि नै बलिउडमा चर्चित छ। सलमान खानकी पूर्वप्रेमिका कट्रिना कैफकी बहिनी इशावे कैफले सलमानको चलचित्रबाट हलिउड यात्रा आरम्भ गरेपछि यो छायांकन सुरु भएदेखि नै बलिउडमा समेत चर्चा सुरु भएको हो।
बेलायतमा ट्याक्सी चलाउने एकजना बेरोजगार भारतीय चिकित्सकको कथा समेटिएको चलचित्र ‘डा. क्यावी’मा विनय भिरमनी र एड्रिन पलिकीको मुख्य भूमिका छन् भने इसावेले कैफ र कुनाल नायरले सहभूमिकामा अभिनय गरेका छन्।
साभार :अन्‍नपूर्ण पोस्ट
जोन अब्राहमसँग रोमान्स गर्दै विवाहित ऐश्वर्या ?
क- कसले मच्चाउदैछन 'ताण्डव' ? तस्वीरहरु ।